စိုင်းစိုင်းလားရှိုး ( ရှင်ရဲထွတ် ): April 2010
Saturday, April 10, 2010 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 8:01 AM
အတာက ကူးပြန်လေပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တန်ခူးလဟာ အငွေ့တောင် မသေတတ်သေးတဲ့ အရိပ်အယောင်နဲ့ နွေးရှရှ ရှိနေတုန်းလေ။မပြောင်းလဲတတ်တဲ့ သဘောနဲ့ အိုက်စပ်စပ် ရာသီကို မိုးရိပ်တွေ ဆင်ပြီး တိုက်ခတ်လာတဲ့ လေနုအေးလေးက ခဏသာ ရင်ကို အေးမြစေခဲ့ တာတော့ အမှန်ပဲ။
ဒါပေမယ့် အတိတ်ဆိုတာ တစ်ကယ်ဖြစ်ခဲ့တာလေ။ အများနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပိတောက် အချိန်မှန်စွာနဲ့ သူဟာသူ ပွင့်တာပါ။ ဒါကို အတ္တကြီးစွာနဲ့ ငါဟာ မပွင့်ပါနဲ့ မပွင့်ပါနဲ့လို့ တားဆီးချင်ပေမယ့် မိုက်ရူးရဲတဲ့ အတွေးကို ငါမောင်းထုတ်ခဲ့ရတယ်။ တစ်ကယ်ဆိုရင် အတာကူး တဲ့ လတန်ခူးနဲ့ ရေပက်ကစားကြတဲ့ သင်္ကြန်၊ ပိတောက်ပွင့်တဲ့ ရက်အပိုင်းအခြား တစ်ထပ်ထဲ ကျခဲ့တာ ခုမှ မဟုတ်တာ။ သူ့ရပ်တည်မှုနဲ့သူ နေလာခဲ့တာ ကြာပြီလေ။ တစ်ကယ်တမ်း ရပ်တည်မှု မှားခဲ့တာ ငါပါ။
ဒီလို ရက်ပိုင်းမှာ တွေ့ကြတဲ့ တွေ့ဆုံမှုဆိုတာ မိုးပြေးလေး တစ်ချက်လို ခဏတာပဲ ဆုံတွေ့ရမယ့် ဆုံမှတ်ဆိုတာကို ငါသတိမ ထားမိခဲ့ဘူး။ အမြဲတမ်းရမယ့် ပျော်ရွှင်မှုလို့ ထင်မှတ် စွဲလမ်းခဲ့ရတယ်။ ပိတောက်ကိုလည်း ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ စာဖွဲ့ခဲ့တယ်။ ရေစိုသင်္ကြန်ကို လည်း စာတစ်တန် ပေတစ်တန် သီကုံးခဲ့ဖူးတယ်။ ခုတော့လည်း နွမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ ပန်းပိတောက်ဟာ နောက်တစ်ခါ ပြန်လို့ပွင့်လန်းတော့မယ် ဒါပေမယ့် ... ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်နဲ့ ရင်ဘတ် တစ်ခုက ပွင့်လန်းတော့မယ့် ပိတောက်ပန်း အသစ်ကို နာမ်စား အသစ်တစ်ခုနဲ့.....
ပိတောက်ဆိုတဲ့ ပန်းကို နာမ်စားပြောင်းပေးလို့ ရခဲ့ရင် အလွမ်းပန်းလို့ ငါပေးခဲ့ပါရစေ။
Tuesday, April 6, 2010 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 11:03 PM
အား........ ညကလည်း အရမ်းအေးတာပဲ။ မှောင်လိုက်တာလည်း အရမ်းပဲ အပြင်မှာဆို တော်တော်အေးမှာ။ ခုတောင် စာကျက်နေတာ စားပွဲ အ၀ိုင်းနဲ့ မောင်နှမ သုံးယောက် ကိုယ်စီ အနွေးထည် မနိုင်လို့ စောင်ပတ်ပြီး စာကျက်နေရတယ်။ အငယ်သုံးယောက်တော့ အိပ်နေပြီ။ ဖေဖေနဲ့ မေမေက တဲအိမ်လေးရဲ့ အလယ်မှာ မီးဖိုရင်း စကားပြောနေကြတယ်။
ထရံကာဆိုတော့ တိုးဝင်လာတဲ့ လေကလည်း အေးလိုက်တာနော်။ ထွန်းထားတဲ့ ဖယောင်းတိုင်မီးက ယဲ့ယဲ့။ စာကျက်ပျင်းတဲ့ ကျနော် ဂေါက် ခနဲ လက်သံပြောင်တဲ့ အမ အိပ်ချင်ပေမယ့် ကကြီးကို ယပလက်လို ကျိတ်ဆိုနေရတယ်။ ဟိုမှာလေ အမေတို့ မီးဖိုတဲ့နေရာ ပြေး သွားချင် လိုက်တာ ချမ်းလို့ပေါ့။ အမကိုလည်း ကြောက်တယ် မသွားရဲဘူး။
ခဏနေတော့ ဖေဖေက အလုပ်ရှုပ်နေတာ ကျနော် တော်တော်လေး ပျော်သွားတာလေ။ သိတာပေါ့ ဖေဖေ ဘာလုပ်နေလည်းဆိုတာ ....
ညနေက ကျန်တဲ့ ထမင်းကြမ်းနဲ့ ဟင်းကို ရောသမ မွှေနေပြီဆိုတာ။ အေးကလည်းအေး ငိုက်ကလည်း ငိုက် စာကျက်ပျင်းတဲ့ ကျနော် ဖေဖေ လုပ်နေတာကို ကျိတ်ပြီး သဘောကျနေတာ ခေါ်သံလေးကို စောင့်နေမိတယ် မျက်လုံးတောင် ပြူးလာသလားပဲ။
ခဏနေတော့ တဲအိမ်လေးဟာ ဆန်ပြုတ်နံ့ သင်းနေပြီ။ အိပ်ပျော်နေတဲ့ အငယ်ကောင်က ချမ်းလို့လား မသိဘူး အီသံပေးနေပြီ အမေက ထချော့ရော။ အလတ်မက မျက်လုံးပွတ်ပြီး ကုတင်ပေါ်ကနေ ဆင်းလာတယ် မမြင်မကန်းနဲ့လေ ဆန်ပြုတ်ရပြီလားတဲ့ ချော်လဲသေး တယ်။ နို့ညှာက မနှိုးသေး သူက အိပ်ပုတ်ကြီးတယ်။
ဒေါင် ဒေါင် ဒေါင် ဒေါင် ဒေါင် ဒေါင် ဒေါင် ဒေါင် ..... ဟော မီးကင်းက သံချောင်း ရှစ်ခါမြည်တယ်ဗျ ... ဖေဖေလည်း ဆန်ပြုတ် ရှစ်ခွက် ထည့်ပြီးသွားပြီ။ ချမ်းကလည်းချမ်း မီးဖိုနားလည်း သွားချင်ပြီ။ ဖေဖေက မနှိုးသေးတဲ့ နို့ညှာကို ပွေ့ခေါ်လာပြီး လာဟေ့ ဆန်ပြုတ် ရပြီတဲ့။
ဟာ........ အဲ့တုန်းက အပျော် ခု ဘယ်မှာ ရမှာလည်း ? ဆောင်းတွင်းအခါ သမယ ရှမ်းမြေမြင့်က မိသားစု ဖြစ်ခဲ့ဖူးရင်၊ အခြေအနေခြင်း တူခဲ့ဖူးရင် ဆန်ပြုတ် တစ်ခွက်ရဲ့ ရသ ???
Sunday, April 4, 2010 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 3:03 PM